Taorian’ny fety sy ny rivodoza : nalamina ireo mpivarotra tsy ara-dalàna | NewsMada
Taorian’ny fety sy ny rivodoza : nalamina ireo mpivarotra tsy ara-dalàna
Taoriana ny fety, niroso tamin’ny fandaminana sy fanisahana ireo mpivarotra tsy ara-dalàna izay mibahana ny arabe ny ekipan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra nanomboka ny alatsinainy teo. Nanomboka teny Andohan’Analakely sy teny amin’ny Esplanade izany hetsika izany ary mbola hitohy hatreny Isotry sy ny manodidina.
Taorian’ny fandaminana, nanomboka nalalaka ny fifamoivoizan’ny fiara, nilamina ihany koa ny fiainan’ireo mpandeha an-tongotra satria malalaka ny arabe sy ny sisin-dalana. Niverina tamin’ny laoniny, araka izany, ny andavanandron’ny mponina.
Mba hitazonana izao filaminana izao, nilaza ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fari-piadidiana ny Tanàna fa efa manohy ny asany hatrany ny polisy monisipaly sy ireo ekipan’ny tsena ary tsy hihemotra fa hitohy sy hihamafy hatrany izany fandaminana ny tanàna izany.
Zatra gaboraraka ireo mpivarotra nandritra ny fety fa nanjakazaka teny amin’ny sisin-dalana sy nanelingelina ny fifamoivoizana. Tsy maintsy misy ny mimenomenona rehefa ampiharina ny lalàna. Ny fampandrosoana tanàna anefa, tsy tanteraka raha tsy misy ny fampanarahan-dalàna.